Sales Network - Yantai Ishikawa Kuchengetedza Technology Co., Ltd.
Mushure memakore mazhinji ekuedza, YTSC yakave inokwanisa kuita magadzirirwo uye miedzo inowirirana kuOEM. Izvo zvigadzirwa zvinogamuchirwa zvakanyanya muminda senge mota dzekutengesa, mota dzevanofamba, ngarava, michina yakajairika, petrochemical indasitiri uye kupisa magetsi chiteshi.
Kuisa chisimbiso magaskets, zvikamu zverabha uye nhoo dzekupisa zvinopihwa kumainjini emakambani anodarika makumi manomwe akaita seFAW, DFM, SAIC mota, Weichai Simba, Wuxi Simba, SDEC, YC DIESEL, DEUTZ - Dalian Diesel Injini）, Huachai Simba, SINOTRUC, GAC mota . Iyo-yekuzvigadzira V12 yekuisa chisimbiso gasket (S1003030-46K cylinder gasket) yakaiswa mumotokari yekudzokorora yeMutungamiri Hu Jintao pamutambo wechiNational Anniversary we60.
Fibha yekuisa chisimbiso mahwendefa anogamuchirwa zvakanyanya mu petrochemical maindasitiri nemidziyo uye anonyanya kupihwa QPEC, Daqing Petrochemical, Jilin Chemical Indasitiri, GSI, CSSC, Bohai Ship-yadhi, nezvimwe. Parizvino zvigadzirwa zvinotumirwa kuJapan, Korea, Australia, Southeast Asia uye Middle East.
Glue-yekunamatira mahwendefa anonyanya kushandiswa mukusimbisa matsime, silencers, mabhureki emabhureki, nezvimwewo uye vakawana kuzivikanwa kwakawanda kubva kumusika. Izvo zvigadzirwa zviri kuenda kumusika wekunze kwenyika uye uye uye vamwe vacho vakunda mvumo yevatengi.